အထည်ချုပ်အသင်းဒုဥက္ကဌ က စီးပွားကူးသန်း ၀န်ကြီးလား မြန်မာ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဌလား(ဒီတိုင်းကြည့်နေကြတော့မှာလား) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အထည်ချုပ်အသင်းဒုဥက္ကဌ က စီးပွားကူးသန်း ၀န်ကြီးလား မြန်မာ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဌလား(ဒီတိုင်းကြည့်နေကြတော့မှာလား)
အထည်ချုပ်အသင်းဒုဥက္ကဌ က စီးပွားကူးသန်း ၀န်ကြီးလား မြန်မာ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဌလား(ဒီတိုင်းကြည့်နေကြတော့မှာလား)
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Oct 19, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
အထည်ချုပ်အသင်းဒုဥက္ကဌ က စီးပွားကူးသန်း ၀န်ကြီးလား
ကျွန်တော်များ (CMP) လုပ်ငန်းသည် ကုန်ကြမ်းပေးကုန်ချောယူစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး
ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းညခင်းတင်ပို့ခြင်းတို့အား အခြားကုမ္ပဏီများနည်းတူ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ
(CMP) လုပ်ငန်းသဘောတရားမှာ အထည်ချုပ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ချုပ်ခ လက်ခစားသာဖြစ်ပြီး တင်သွင်းလာသောပစ္စည်း
နှင့်ကုန်ချော ထုတ်လုပ်လိုက်သောပစ္စည်းများမှာမိမိပိုင်မဟုတ်ပဲ တစ်ဖက် ချုပ်ခပေးအပ်နှံသူ၏ ပစ္စည်းသာဖြစ်ကြောင်း လုပ်
ငန်းလုပ်ကိုင်သူအတော်များများသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ချုပ်ခရရေးလုပ်ငန်း လက်ခံသူနှင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူတို့ ကြားအကြိမ်ကြိမ် “ကွန်ဆန်းရှင်း %” /အထည်အရေအတွက် /တစ်ရက်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု/ သတ်မှတ်ရက် Export Deat Line Date စသည်တို့နှင့် အချိန်မှီ မအပ်နှံနိုင်က ပေးလျှော်ခြင်းပြုရန် စသည့်စာချုပ်များချုပ်ဆိုပြီးမှ တဖက်နိုင်ငံလုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ တာဝန်ဖြစ်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းအား စတင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်တတ်နိုင်သမျှအားဖြင့်ကုန်ကြမ်း နည်းနည်းနှင့်ချုပ်ထည်ပြည့်မှီစေမှ သာ အပ်နှံသူအနေဖြင့် အမြတ်ကျန်မှာဖြစ်ပြီးအမှန်တစ်ကယ်တင်ပို့ရမည့်ကုန်ကြမ်းထက်ပိုမိုတင်ဆောင်ပေးပို့ခြင်းလုံးဝမရှိ
သည်မှာ သာမာန်လူ တစ်ယောက်စဉ်းစားလျှင်ပင်သိနိုင်ပါသည်။
(CMP) လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင် ကုနကြမ်းပစ္စည်းလဲမိမိပိုင်မဟုတ်သလို ကိုယ့်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော ကုန်ချောသည်
လဲ ကိုယ်ပစ္စည်းမဟုတ်ပဲ တစ်ဖက်သို့ ပြန်လည်တင်ပိုရသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်ကို လုပ်ငန်းရှင်တိုင်သိကြမည်ဖြစ်ပါသည်
သို့ရာတွင်အထည်ချုပ်အသင်းဒုဥက္ကဌသည် တစ်ဖက် ကုန်ပစ္စည်းအပ်နှံသူမှ ကုန်ချောချုပ်လုပ်နိုင်ရန် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ တင်ပို့လိုက်ရာတွင် ပေးပို့ သော Profoma Invoice ပါ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းအတိုင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်
အထည်ချုပ်အသင်းဒုဥက္ကဌ ဒေါက်တာအောင်ဝင်း ကြီးစိုးချယ်လှယ်နေသော One Stop Services မှ စစ်ဆေးပေးစဉ် “ ကွန်ဆန်းရှင်% ” များနေတယ် “ အပ်ချည်လုံးကတစ်ထည်ကို ဘယ်နှစ်မီတာပဲသုံးရမှာ ပြန်လျှော့ ” …ပိတ်ကွန်ဆန်းရှင်း%””
များနေတယ် ပိတ်ကွန်ဆန်းရှင်း% ပြန်မလျှော့ ပေး အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုပိတ်က 1.5(M) ပဲသုံးခွင့် ပေးတယ်အခုကများနေတယ် ပြန်လျှော့““ ကြိုးတွေက အင်္ကျီတစ်ထည်ကို 2(M) ဆိုရပြီ ကြိုးတွေလဲပြန်လျှော့ပေး စသည်ဖြင့် ဘာမှမတတ်ပဲ လူတတ်ကြီး
ပုံဖမ်းကာ ယခင် ကသိခဲ့ဘူးသော သင်ရိုးအဟောင်းကြီးအတိုင်း ကုမ္ပဏီ တိုင်းကို ဒုက္ခပေးနေပါတော့တယ်။။
တစ်ခုပဲမေးချင်ပါတယ် တဖက် ကုန်ချောအပ်နှံသူက သင်္ဘောတင်ပေးလိုက်တဲ့စာရင်းအတိုင်း သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထား
ရာမှာ သူ့ကုမ္ပဏီမှာရော သင်္ဘောတင်တာက ““ကွန်ဆန်းရှင်း%””မကိုက်ညီလို့ လျှော့ပြီး လိုင်စင်လျှောက်ဘူးပါသလား
အဲဒါဆိုရင်တော့ invoice ပါအရ သင်္ဘောတင်ပေးလိုက်တာကို လိုင်စင်မှာလျှော့ပြရတယ် ဒါဆိုရင် Custom က သွင်းကုန်ကြေ
ငြာလွာမှာ ကွန်တိမ်နာပါအတိုင်းမဟုတ်ပဲ လိမ်လည်ပြီး ကြေငြာသလိုဖြစ်နေပါပြီ ဒါကတစ်ချက်ပါ ။။
ကွန်တိမ်နာ တင်ပို့ လိုက်တဲ့ တစ်ဖက်က ကုန်အပ်နှံသူက ဒါတွေ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် လို့ Invoice ပေးပြီး အသိပေးတာ
ကို ကျုပ်တို့က သွင်းကုန် လိုင်စင်လျှောက်ရာ ဒေါက်တာ အောင်ဝင်းက ဒါတွေ ပါလို့ မရဘူး ““ကွန်ဆန်းရှင်း%”ကများလို့ပြန်
လျှော့ပါဆိုရင် ပါလာတဲ့အတိုင်းCustom မှာ မကြေငြာနိုင်လို့ သူပြန်လျှော့ ခိုင်းတဲ့ အရေအတွက်အတိုင်း Custom က သိမ်း
ဆည်းမယ် ဒါဏ်ရိုက်မယ်ဆိုရင် ဒုဥက္ကဌ က ““သူကမရဘူးပြန်လျှော့ ””ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေအတွက် ဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးမလဲ
ဒါမှမဟုတ်မ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်က ပထမလျှောက်ထားစဉ်မှာတော့ ကုန်ပါစာရင်းအတိုင်းပါ အထည်ချုပ်ဥက္ကဌ က မရဘူးပြန်
လျှော့ဆိုလို့ လျှော့ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် လိုင်စင်နှင့်ကုန်ပါစာရင်းကိုက်ညီမှု မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် အထည်ချုပ် အသင်း
ဆီမှသာ( VPA / RF ) ဒါဏ်ကြေးများတောင်းယူပါရန်ဆိုပြီး ပထမ One Stop Service မှာ ပထမဆုံးတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့
လိုင်စင် ဖိုင် အတွဲကို Custom ကိုတင်ပြကြရန် လုပ်ငန်းရှင်များအားလဲ တိုက်တွန်းပါတယ်။။
နောက်တစ်ချက် ပြောချင်ပါတယ် အပ်ချည်ကိစ္စ အပ်ချည်အသုံးပြုရာမှာ အများဆုံးကတော့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်အလေအလွင့်
အများဆုံး ပစ္စည်းဟာ အပ်ချည်ပါပဲ ဒေါက်တာအောင်ဝင်းက င်္အကျီင်္ တစ်ထည်ကို ဘယ်နှစ်မီတာနဲ့ချုပ်ရင်ရတယ်ပြောရအောင်
သူကစက်ချုပ်ဖူးလားမေးရမယ် သူချုပ်ရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ အပ်ချည်အရှည်ကိုဖြတ်ပေးပါမယ် သူ့စက်ရုံမှာသူကိုတိုင်ချုပ်ကြည့်
ပါ အပ်ချည်ပြတ်လို့ သွားနဲ့ကိုက်ဖြတ်ပြီး ချည်ပြန်ထိုးရာမှာ ကိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ အစတွေ ကသူပြောတဲ့ တစ်ထည်
မဟုတ်ပါဘူး အထည်များစွာချုပ်လို့ ရတဲ့ အရေအတွက်ရှိပါတယ် သူ့စက်ရုံမှာရောအဲလိုပဲ အတိုင်းအတာနဲ့ စက်ချုပ်သမတွေ
ကျွန်တော်များ (CMP) ကုမ္ပဏီများအသုံးပြုတာ Licence ပါ Permit မဟုတ်ပါဘူး လိုင်စင်ဖြစ်တဲအပြင် အကြိမ်ကြိမ်သက်တမ်း
မကုန်မခြင်း အလီလီတင်သွင်းလုိ့ရပါတယ် ပါမစ်လို့ ဟိုဟာလျှော့ ဒီဟာလျှော့ ပြောလို့ ရတဲ့ တစ်ခါသုံး မဟုတ်ပါဘူး သက်တမ်း မကုန်မခြင်း အော်ဒါတူရင် ဆက်တိုက်တင်သွင်းလို့ရပါတယ် အဲဒီလိုတင်သွင်းနိုင်အောင် Import Bill Regester
(I.B.R)ကို ထုတ်ပေးပြီး စာရင်းလုပ်ထားပါတယ် လိုင်စင် ပါတန်ဘိုးထက်ပိုသွင်းလို့မရပါဘူး ဒီအပြင် နှစ်ချုပ်လချုပ်များနဲ့
လဲ တင်ပြစေပြီး စီစစ်နေပါတယ် အ၀င် ကုန်အလေးချိန် အထွက်ကုန်အလေးချိန်များနဲ့လဲ ချိန်ညှိစစ်ဆေးပါတယ် ဒါကြောင့်
(CMP) လုပ်ငန်းဟာ နောက်ကြောင်းလိုက် စစ်ဆေးခြင်း တန်းဖိုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းတင်သွင်းစေခြင်း ကုန်ပစ္စည်းအလေး
ချိန်ကို ချိန်ညှိ စစ်ဆေးခြင်းတွေကိုသာ လုပ်ဆောင်ပြီး မမှန်မကန်တွေ့ရှိပါက အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြေရှင်းတင်ပြစေခြင်း
များကိုသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ဒါကြောင် အထည်ချုပ်ဒုဥက္ကဌ ၏ ယခုလုပ်ဆောင်နေသော ““ကွန်ဆန်းရှင်း%””လက်မခံ
ခြင်း ဟိုဟာနည်းတယ် ဒီဟာများတယ် ပြောနေခြင်းဟာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာမှာ လွန်စွာအနှောက် အယှက်ဖြစ်ပြီး လုံးဝမလို
အပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များသာဖြစ်တဲ့ အပြင် တင်ပြချက်အတိုင်း လိုင်စင်မရရှိတဲ့အတွက် လိမ်လည်တင်သွင်းကြရန် တွန်း
အားပေးသကဲ့သို့ဖြစ်နေစေပါတယ် ထိုအပြင် နှစ်ရှည်အော်ဒါ ချုပ်လုပ်သော စက်ရုံကြီးများအတွက် လုပ်ငန်းတွင်းကုန်ကြမ်း
ပြည်မှီစွာတင်သွင်းရေးအတွက် ဒုဥက္ကဌ ဒေါက်တာအောင်ဝင်းဟာ ခလုပ်ကန်သင်း တစ်ခုလိုအရှုပ်ထုတ်ဖြစ်နေပါတယ်..။။
(CMP) ကုန်ကြမ်းသည် ၀ယ်ယူတင်သွင်းလာခြင်းမဟုတ်ပဲ တစ်ဖက်ကုန်အပ်သူမှ““တင်ပို့လိုက်သောပစ္စည်””သာဖြစ်သဖြင့်
လျှော့လို့မရပါ /တိုးလို့မရပါ Invoice အတိုင်သာအမှန်တင်သွင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ် “““ထို့ကြောင့် One Stop Service ””မှ
ONE MEN SHOW ဒေါက်တာအောင်ဝင်းကြီးစိုးသော အဖွဲအားဖျက်သိမ်းပေးပါရန်နှင့် ယခင် နေပြည်တော်သို့ လိုင်စင်သွား
ရောက်လျှောက်ထားရန် မလိုတော့ခြင်းကြောင့် အထည်ချုပ် အသင်းနာမည်မပျက်စေရေး စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်
မြန်မာ့ရင်နှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင် တို့အထက် သူကသာ ကျော်လွန်တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်နေသော စီအမ်ပီ ဆရာကြီးဂိုဏ်းအား
အမြန်ဖြိုခွင်းပေးပါရန် အထည်ချုပ်ဥက္ကဌ ဦးမြင့်စိုး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ဤနေရာမှ အသိပေးအပ်ပါသည်။။
(၂)ဒေါက်တာအောင်ဝင်း ဒုဥက္ကဌ (CMP) ဆရာကြီး(Mapple အထည်ချုပ်)
(၄)ဦးကျော်ဝင်း (tri diamond အထည်ချုပ်)
(၆)ဒေါ်ဌေးဌေးအေး (Thiri Sandar အထည်ချုပ်)
(၇)ဒေါ်အေးအေးဟန် (shweyi sabe အထည်ချုပ်)
(၈)ဦးအောင်ကျော်သန်း (Eagke Power အထည်ချုပ်)
(၉)ဦးမောင်မောင်(ခ) စန်းယု (Shwe sin Aye အထည်ချုပ်)
(၁၀)ဦးမောင်မြင့် (Golden Lion King အထည်ချုပ်)
(၁၁)ဦးဇော်ဝင်း၏ (Win အထည်ချုပ်)
(၁၂)ဦးတေဇထွန်း (A1 အထည်ချုပ်)
(၁၃)ဦးဝင်းဇော် (Gokden Yacht အထည်ချုပ်)
(၁၄)ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် (Best အထည်ချုပ်)
(၁၅)ဦးခင်ထွန်း ( Success Creator အထည်ချုပ်)
ခင်ညားကို..စီအမ်ပီ ဖျက်သိမ်းခိုင်းထားတာ…ခုထိ မဖျက်သေးဘူးလား
ပုံဖမ်းကာ ယခင် ကသိခဲ့ဘူးသော သင်ရိုးအဟောင်းကြီးအတိုင်း ကုမ္ပဏီ တိုင်းကို ဒုက္ခပေးနေပါတော့တယ်။။”
ဒါဆို အကုန် ဒုက္ခများကုန်တော့မှာပေါ့
ဖွတ်မိချောင်းဖြစ် မြစ်မချမ်းသာ ဆိုကလား ပဲ
(((ကွန်ဆန်းရှင်% ” များနေတယ် “ အပ်ချည်လုံးကတစ်ထည်ကို ဘယ်နှစ်မီတာပဲသုံးရမှာ ပြန်လျှော့ ” …ပိတ်ကွန်ဆန်းရှင်း%””
ပုံဖမ်းကာ ယခင် ကသိခဲ့ဘူးသော သင်ရိုးအဟောင်းကြီးအတိုင်း ကုမ္ပဏီ တိုင်းကို ဒုက္ခပေးနေပါတော့တယ်။။ ))) ဆိုတာကိုတော့ ကြိုက်တယ်ဗျို့ … ။
အကျီ င်္တစ်ထည်ရဲ့consumption ဆိုတာက ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်ပါတယ်…. vest မို့လို့တစ်ထည်ကို တကိုက်နှုန်းပဲ သတ်မှတ်တယ် …. Jacket မို့လို့ 1.5 yds သက်မှတ်တယ် အဲ့လိုပြောလို့မရပါဘူး … ။ ချုပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး consumption ကွာတာမို့ လှေနှံဓါးထစ် ဖြစ်နေတာကြီးကို ပြင်သင့်ပါတယ် … ထို့အတူပါပဲ …. sewing thread ဆိုတာမျိုးကလည်း … (ဒီနိုင်ငံရဲ့ အကျီ င်္ အတော်များများမှတော့ အပ်ချည်ကို ပိတ်နှစ်ခု တွဲရာမှာချုပ်တယ်ဆိုတာမျိုး အဓိကထားပေမယ့် … ) သူများနိုင်ငံတွေမှာ အပ်ချည်ကြောင်းကိုတောင် zig zag လိုဒီဇိုင်းမျိုး king cross လို ကြက်ခြေခပ် အထူမျိုး သုံးမယ်ဆိုလျှင် ပိတ်စနှစ်ခုယှဉ်တွဲရာမှာ ကုန်တဲ့ အရေတွက်ထက်မက ပိုလိုပါလိမ့်မယ် … ဒါ့ပြင်ကိုဘီလူးပြောသွားသလို ချုပ်ရင်း အပ်ချည်ပြတ်သွားတာမျိုးဆို … အပ်ပေါက်ပြန်ထိုးတဲ့အခါ အလေလွင့်လည်း ရှိပါလိမ့်မယ် .. … ပုံသေကားချပ် တွက်လို့မရပါဘူးဆိုတာ …. ။ ထောက်ခံပါတယ် …. ။
လူဂျီးဆိုတော့လည်း လူဂျီးပေါ့လေ … ။
မသိဘူးလားဆိုတော့လည်း … သိတယ်ပေါ့ ….။
သိရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ဒီလို #@!%^&% လဲဆိုတော့ ….#@!%^&% လို့ပေ့ါလေ
ကျွန်တော်တို့တော့ အထည်လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘာမှ မသိဘူးဗျ… မအိတုန်ကိုတော့ တော်တော် လေးစားသွားပီ… နေရာတိုင်းမှာ တော်တော် သိတယ်ဗျာ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်တာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ် … နောက်ပီး နိုင်ငံခြား ၀င်ငွေ ရှာပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ ပြည်တွင်း အလုပ်ကိုင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး သတိထား သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်အားပေးသွားပါတယ်
(CMP) ကုမ္ပဏီ (၁၀)ခုခန့် ၏ အခက်အခဲများအား
CMP မှာ ပူးတွဲတင်ပြရတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ဇယားတွေ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ အထူးများပါတယ်..။
စနစ်တကျမှန်ကန်အောင် သတ်မှတ်တဲ့စည်းကမ်းတွေက တစ်လွဲတွေဖြစ်နေတော့ အကြပ်ခံရတဲ့ ကုမ္ပဏီ အများစုဒုက်ခရာက်ကြပါတယ်..။
၂၀၀၀ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က CMP လုပ်ငန်းတွေ Boom ဖြစ်လာတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်..။ အဲ့ဒီတုန်းက Vietnam မှာ CMP မထွန်းကားသေးပါဘူး..။
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း MIC အထူးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီးလင်းသော်လက်ထက်မှာ CMP ကုမ္ပဏီတွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျစ်၊ သူနဲ့သွားတွေ့၊ ဂါရ၀ပြုလိုက်ရင် လွှတ်ပေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်…။
တိုင်းပြည်အတွက် အထူးလိုအပ်တဲ့ CMP စနစ်မှာ လုပ်သာကိုင်သာရှိမှ လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးပြီး အလုပ်အကိုင်တွေများပြားမှာမို့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အမျှော်အမြင်ရှိရှိ ဖြစ်စေလိုပါတယ်..။
မှန်တယ် အစ်ကိုကြီး CMP စနစ်မှာ ဒီ One Stop အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းသင့်တာကြာနေပြီ ကောင်းတယ်